माधवकुमार नेपाल समूहकै कारण चुनावमा जानुपरेको हो : पार्वत गुरुङ | Safal Khabar
शुक्रबार, १४ जेठ २०७८, २० : ०२
मुलुकले बेहोरिरहेको महामारी, दलहरुबीचको बेमेल, घोषित चुनावप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । गणतन्त्र दिवस–२०७८ का अवसरमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका संवाददाता अशोक घिमिरेले लिएको विशेष अन्तर्वार्ताः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको यस छोटो अवधिमा हामी तीन तहको सरकारको निर्वाचन गर्न सफल भएका छाँै । संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानून निर्माण गरेका छाँैं । संविधान निर्माण गरेपश्चात् दुुईतिहाइ नजीकको मत प्राप्त भयो । त्यो जनमतले स्थायी सरकार निर्माण गर्ने आधार तयार भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रुप दिने काम भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति योगदान पु¥याउने राजनीतिक दल, नेता, सामाजिक व्यक्तित्व, नेपाली जनताप्रति गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
गणतन्त्रको आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । जसरी संघीय लोकतन्त्रक गणतन्त्र प्राप्तका निम्ति सिंगो नेपाल एक भएको थियो, त्यसरी नै सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दल फेरि पनि एकताबद्ध ढंगले अहिलेको कोभिडको संकटलाई अन्त्य गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने काममा लाग्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत स्वार्थ, इच्छा, आकांक्षा, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर अहिलेको राजनीतिक संकट र स्वास्थ्य संकटलाई अन्त्य गर्नका निमित्त एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दछुु ।
मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापनका निम्ति संविधानमा जे व्यवस्था छ, संविधानमा भएका सबै धारा÷उपधारा प्रयोग भएको यो ऐतिहासिक हो । जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नुुभयो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो भन्ने हल्ला सडकमा सुनिरहेका छौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा होस्, सरकार गठन र पुनःगठनका विषयमा संविधानको सबै धाराको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दल सहभागी भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लाने वर्तमान सरकारको कुनै साेंच थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाट विश्वासको मत दिएको भए, आफ्नै पार्टीका १२१ सांसदमध्ये २६ जना सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेको भए, आज के संसद् विघटन हुन्थ्यो ? मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जान्थ्यो ? यो परिस्थितिको निर्माण कसले ग¥यो ?
अहिले उहाँहरु भन्नुहुन्छ, संविधान र संसद् बचाउनका निम्ति हामीले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको हो । दिउँसै रात पार्ने ? स्थिर सरकारलाई अस्थिर बनाउने, आफ्नै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्ने, अनि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने ? जसले पार्टी निर्णयको विरुद्धमा गएर क्रियाकलाप गर्छ, उसैले संविधान र संसद् बचाउने ? हाम्रै पार्टीका साथीहरुले आज जसरी राजनीतिक जवाफदेहिताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुु¥याउँछ ? यस्तो गैरसंसदीय अभ्यासले हामी कहाँ पुुग्छौंँ ? मध्यावधिको बाटो लिन बाध्य बनाउने को ? जसले असंसदीय बाटो अँगालेको छ, उनीहरु नै आज त्यसको भागीदार हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुभएन भन्ने टिप्पणी सुनेर मलाई दुःख लाग्छ । सम्मानित संस्थाप्रति टिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि म उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधाराका आधारमा दावी के कारणले पेश गर्नुभयो भनी सोध्न चाहन्छु । उहाँको प्रस्तावमा सही गर्ने एमालेका माधवकुमार नेपाल जसले जीवनभर विधि र पद्धतिको कुुरा गर्नुभयो, प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा सही गर्नु उहाँको विधि र पद्धतिअनुसार थियो कि थिएन ?
संसदीय प्रणालीमा आफ्ना पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु कुन राजनीतिक मिसन थियो ? कि त उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गरेर समर्थन गर्नुपर्ने थियो ।
‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने गर्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैनथ्यो तर अहिलेको अवस्थामा राजनीतिलाई फोहारी खेल जस्तै बनाइएको छ । भावी पुस्तालाई राजनीतिमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने भइरहेको छ । वर्तमान सरकाले गरेका सबै चिज असंवैधानिक देख्ने, सरकारले बेठीक ग¥यो भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाउने, अनि आफू सरकारमा हुँदा जनताको पक्षमा केही पनि नगर्ने ?
अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ न, सांसद किनबेच, पजेरो काण्डसहित अन्य विकृति, विसंगति कसका पालामा भए ? प्रतिपक्षी दलका नेताको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उहाँको प्रधानमन्त्री काललाई एक पटक फर्केर हेर्ने हो भने हामीले उहाँप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका निर्णयले यो मुलुकलाई कता लैजान खोजेको थियो ?
यसअघिका अन्य प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीको कार्यकाललाई तुलना गरौँ । पुष्पकमला दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालको कार्यकाल पनि हेरौँ । संविधान निर्माणपछिको नौमहिने कार्यकाल र अहिलेको तीन वर्षको कार्यकाललाई हेरौँ न । कसको कार्यकालमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, विकास निर्माण, सुशासनका पक्षमा कति काम भयो भनेर विश्लेषण गरौँ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा देश र जनताको हितविरुद्धका काम भएको प्रमाणित गरे वर्तमान सरकारको प्रवक्ताको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम गलत भयो भन्न म सक्छु ।
अहिलेको राजनीतिक संकट तथा स्वास्थ्य संकटका बेला उहाँले मुलुकलाई जसरी नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो संविधानसम्मत र राजनीतिकरुपमा लिइएका कदम र निर्णय ठीक छन् । संविधानलाई सम्मान र सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्दै उहाँ अगाडि बढिरहनुुभएको छ । मधेशी जनताको युगौँयुुगदेखिको माग सम्बोधन भएको छ ।
मधेशी जनता तथा मधेश पक्षधर राजनीतिक दलले मधेशको मात्र मुद्दा उठाउन नपरोस् भनेर समृद्ध मधेशको दृष्टिकोण बोकेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुुभयो । उक्त अभियानबाट त्रसित भएर फेरि पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने मधेशमा पनि उहाँको प्रभाव बढ्ने भयो भनेर केहीलाई चिन्ता थपिएको छ ।